तपाईको आजको दिन कस्तो छ? थाहा पाउनुहोस् तपाईंको राशिफल – OSNepal
तपाईको आजको दिन कस्तो छ? थाहा पाउनुहोस् तपाईंको राशिफल
LC (KTM) May 06, 2022 0
काठमाडाैं, २३ वैशाख-२३ वैशाख २०७९, शुक्रबार । तद्नुसार मे महिनाको ६ तारिख । बैशाखशुक्ल पञ्चमी,बालब करण, आद्रा नक्षत्र, धृति योग, चन्द्रमा मिथुन राशिमा छ । आज बिहान सूर्योदय बिहान ५ः२३ मा भएकाे छ भने सूर्यास्त १८ः४० मा हुनेछ ।
मीन(दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची) : बिहान सूर्योदयको दर्शन गरेर मात्र आजको दिनको शुरुवात गर्नुहोला । सकारात्मक सोच र अध्ययन अध्यापनमा मन लगाउनु होला । मीन राशिका जातकका लागि अध्यापन, लेखनमा रुचि बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने केही हानी हुनसक्नेछ । सामाजिक सेवाको काममा समय दिनु भए राम्रो हुनेछ